Avadiho ny rakitra PST taloha ho New Outlook 2003 Unicode Format - torolàlana iray isaky ny dingana
Home Products DataNumen Outlook Repair Avadiho ny Outlook 97-2002 PST File ho Outlook 2003-2010 Unicode Format
mampiasa DataNumen Outlook Repair hanova Outlook 97-2002 PST File ho New Outlook 2003-2010 Unicode Format
Fanamarihana: tsy maintsy apetrakao ny Outlook 2003 na ny avo kokoa raha hampiasa an'ity torolàlana ity.
Hatramin'ny Outlook 2003, misy endrika fisie PST vaovao natolotra izay manana tombony betsaka kokoa noho ny taloha. Ho an'ny mpampiasa farany, ny most ny zava-dehibe dia:
Tohano ny Unicode amin'ny fiteny maro
Tsy misy fetra 2GB amin'ny haben'ny rakitra PST
Tsy misy fetra 65,000 (na 16,000 ho an'ny kinova taloha kokoa) amin'ny isan'ireo entana isaky ny fampirimana
Noho ilay voalohany dia antsoina koa ilay endrika vaovao Endrika Unicode mahazatra, raha antsoina kosa ilay endrika taloha Endrika ANSI mifanaraka amin'izany. Ireo anarana roa ireo dia hampiasaina mandritra ity toro-lalana ity. Toy ny amin'izao fotoana izao dia mitombo haingana be ny angon-drakitra fifandraisana, ny fanesorana ireo fetra amin'ny rakitra PST dia tena zava-dehibe amin'ny mpampiasa. Noho izany, manoro hevitra anao izahay hanova ireo rakitra ANSI PST taloha ho lasa endrika Unicode vaovao. Ankoatr'izay, ity koa ilay vahaolana tsara indrindra ho an'ny olan'ny rakitra 2GB PST be loatra.
Microsoft dia tsy namokatra fitaovana afaka manao ny fiovam-po. Aza matahotra anefa. DataNumen Outlook Repair afaka manao an'io ho anao.
Fanamarihana: Alohan'ny hanovana rakitra ANSI PST taloha amin'ny DataNumen Outlook Repair, akatony azafady ny Microsoft Outlook sy ireo rindranasa hafa mety manova ny fisie PST.
Safidio ny rakitra ANSI PST taloha ho rakitra PST loharano azo amboarina:
Satria ny fisie PST dia ao amin'ny endrika Outlook 97-2002 taloha, azafady mba farito ny endrika fisie ho "Outlook 97-2002" ao amin'ny boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra. Raha avelanao ho "Auto Determined" ilay format, dia DataNumen Outlook Repair dia hanao scan ny rakitra PST loharano hamaritana ny endriny ho azy. Na izany aza, mila fotoana fanampiny izany ary tsy ilaina.
Default (nitranga in- DataNumen Outlook Repair dia hitahiry ireo tahirin-kevitra voaova ho rakitra PST vaovao antsoina hoe xxxx_fixed.pst, izay xxxx no anaran'ny fisie PST loharano. Ohatra, ho an'ny rakitra PST loharano Outlook.pst, ny fisie default default dia ho Outlook_fixed.pst. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny mampiditra ny anaran'ny fisie niova fo mivantana na tsindrio ilay bokotra hijerena sy hisafidianana ny anaran'ny fisie niova fo.
Raha te hanova ny fisie ANSI PST ho endrika Unicode isika dia tsy maintsy misafidy ny endrika fisie ilay rakitra PST niova fo ho "Outlook 2003-2010" ao anaty boaty kombo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra voaova. Raha apetrakao amin'ny "Outlook 97-2002" na "Auto Determined" ny format, dia DataNumen Outlook Repair mety tsy hahomby amin'ny fanodinana sy fanovana ny rakitra ANSI PST anao.
Mariho tsara fa tsy maintsy apetrakao ny Outlook 2003 na ny dikan-teny avo kokoa mba hahavitana tsara ny fisie.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Outlook Repair start scanning sy fanovana ny rakitra ANSI PST loharano. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotrany, raha azo ovaina ao anaty rakitra vaovao Unicode PST ilay rakitra ANSI PST, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ny rakitra PST niova fo vaovao dia ao amin'ny endrika Unicode, izay azon'ny Microsoft Outlook 2003 sokafana na ny kinova ambonimbony kokoa.
Ao amin'ny rakitra PST niova fo vaovao, ny atin'ny hafatra sy ny fonosana dia hosoloina fampahalalana demo. Mba miangavy re manafatra ny kinova feno hahazoana ny atiny voaova marina.
Avadiho ny Outlook 97-2002 PST File ho Outlook 2003-2010 Unicode Format